အွန်စောတို့ဌာနေ: Kongju National University at Kongju City, A City of Korea,
Kongju National University at Kongju City, A City of Korea,
၉.၉.၂၀၀၉ ရက်နေ့က မှတ်မှတ်ရရ ဂုန်းဂှူး တက္ကသိုလ် (KNU) က foreigners တွေအတွက် Orientation လေးလုပ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံခဲ့ရတာတွေမှာတော့ အညံ့ဆုံး အစီအစဉ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ကျောင်းမို့ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဟဲ--ဟဲ--။ ကျောင်းသားအားလည်း အနည်းဆုံးပါပဲ။ အတွေ့အကြုံ နည်းသေးတာလည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံပြောတာပါ။ အရင်နေခဲ့ဘူးတဲ့ ရှင်းလာ (Silla) တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက အစည်းဝေးတွေမှာ ကိုရီးယားလိုပြောပြီးလျှင် တရုတ်လို ဘာသာပြန်တယ်။ ပွတ်ကရောင်း မှာ ကြုံလို့ အစည်းဝေးတစ်ခု လိုက်တက်ဖြစ်တာ။ ၄ ဘာသာသုံးတယ်။ ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ နောက်ဆုံးပြင်သစ်လို ဘာသာပြန်ပေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားတွေအလည်း အများသားကို။ ဒီမှာက ပြေးကြည့်မှ ၃၀ တောင်မပြည့်ဘူး။ ဒီအထဲ NIIED scholar student က ကျွန်တော်အပါအ၀င်မှ ၆ ရောက်ပဲရှိတာ။ ကံဆိုးစွာ လို့ပဲပြောရမလား ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ ရယ်ဆန် (Yesan campus) ကျောင်းခွဲမှာ ရောက်နေတာ။ ကျွန်၅ ယောက်က main campus မှာ။ သူတို့တစ်တွေကတော့ Orientation ပြီးတာနဲ့ ရုံးက ၀န်ထမ်းနျစ်ယောက်က သူတို့ကားလေးတွေနဲ့ တင်ခေါ်ပြီး Kongju City Tour သွားကြတယ်လေ။ ပြတိုက်တွေလျှောက်လည်ကြမယ်တဲ့။ ပြီးတာနဲ့ အတူ Dinner စားကြမယ်တဲ့လေ။ နော်နော် တစ်ယောက်ကတော့ အဝေးတစ်နေရာကို ပြန်ရမှာမို့ သူတို့အားလုံးကို စောစီးစွာတ တာ ပြခဲ့ရတယ်။ နာရီပိုင်းလေးတင်တွေ့ခဲ့ဆုံခဲရပေမဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေတော့ ဖလှယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ယောက်က မွန်ဂိုကျောင်းသား။ နောက်နျစ်ယောက်က မြောက်အမေရိက ကနေဒါနိုင်ငံနားက နိုင်ငံတစ်ခုက တဲ့ အမည်တော့မေ့နေပြီဗျာ။ နောက်ကျောင်းသူနျစ်ယောက်ကတော့ အယ်ဆာဗာဒို ကတဲ့။ အင်း နိုင်ငံအသီးသီးကပါပဲ။
Kongju ဆိုတာက Daejon ကနေ သွားမယ်ဆိုလျှင် အနောက်တောင်ဘက် ယွန်းယွန်း ၄၅ မိနစ် ကားခရီးမှာရှိပါတယ်။ ဒီတက္ကသိုလ်မှာက Campus4ခုရှိပါတယ်။
၁။ Kongju Singwan Campus (Main Campus) မှာတော့ အများကြီးပေါ့။ ကျယ်လည်းကျယ်ဝန်းတယ်။
၂။ Yesan Campus မှာတော့ College of Industrial Sciences တစ်ခုပဲရှိတယ်။
၃။ Kongju Okryong Campus မှာလည်း College of Visual Image & Health တစ်ခုပဲရှိတယ်။
၄။ Cheonan Campus မှာလည်း College of Engineering တစ်ခုပဲရှိတာ။
ကျွန်တော် Yesan Campus ကနေ Main Campus ရေ့ာက်ဖို့ ၄၅ မိနစ်လောက် ကားစီးရတယ်။ ကျန်တဲ့ campus တွေတော့ မရောက်ဘူးသေးဘူး။ သိပ်တော့မနီးဘူး။ Map မှာကြည့်ရတာလေ။ ကျွန်တော်နေတဲ့ ရယ်ဆန်မြို့လေးက ဒဲဂျွန်း (Daejon)ကနေ တစ်နာရီခွဲခရီး အနောက်တောင် ယွန်းယွန်းမှာရှိပါတယ်။ ဒဲဂျွန်းကနေလာမယ်ဆိုလျှင် ဂုန်းဂျူး (Kongju) နဲ့ လားရာတစ်ခုထည်းပါပဲ။ ဆိုးလ် မြို့ကိုသွားမယ်ဆိုလျှင်လည်း တစ်နာရီ လောက်ပဲ စီးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Campus တွေ အများကြီးရှိတဲ့ကျောင်းရဲ့ အားနည်းချက်လို့ပြောရမလားပဲ။ Main Campus မှာ facilities တွေပြည့်စုံပေမဲ့ ကျန်ကျောင်းခွဲတွေမှာတော့ ကျောင်းသားတွေအတွက် facilities က အားနည်တယ်။ ဘူဆန်မှာနေရတာနဲ့ကတော့ တစ်မျိုးစီပါပဲ။ လူရှုတ်တာမကြိုက်တဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အတော်ပါပဲ။ အိမ်ခန်းကျယ်ကျယ်ှုငှားထားတော့ ဧည့်သည်လာလျှင် အားမနာရတာပေါ့ဗျာ။ ကြိုဆိုလျှက်ပါနော်။ တစ်ခေါက်တစ်ခါ အရောက်လာခဲ့စေချင်ပါတယ်။ ဟဲ--ဟဲ--။ ဒီတစ်ခေါက် ဓါတ်ပုံတော့ သိပ်မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။
ဒါလေးက Main Campus ပါ။ ဒါလေးကတော့ Yesan Campus ပေါ့ဗျာ။ အဆောက်အဦးက ဒီသုံးခုပဲရှိတာ ဒီကျောင်းမှာ။
ဒါလေးကတော့ KNU ရဲ့ Short note ကလေးပါ။
The College of Education has inherited 50 years of long tradition from the Kongju National Teachers' College established in 1948, has 18,000 graduates and has gainedanationwide reputation for quality teachers in secondary education.
It offers its courses in two divisions (nine majors) and 15 departments, the biggest among national colleges of education.
Posted by Korea-Myanmar Mutual Benefit at 4:52 PM
Labels: Excussion, Korea's Scenery, Meeting
လာလည်ရင် တကယ်ခေါ်မှာလားဗျ.. အွန်စောရ..